Guddoomiyaha gobalka Banaadir oo ku baqay in loo istaago kor u qaadida Bilicda Xamar – Radio Daljir
Diseenbar 5, 2018 6:31 g 0
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo ka qeyb galay munaasabad looga hadlayay daadajinta adeegyada bulshada oo ka dhacday Degmada Dharkiinleey ayuu ku dhiirigeliyey Maamullada Degmooyinka in ay dar-dargeliyaan fulinta adeegyada bulshada.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in la xoojiyo dadaallada wadajirka ah ee lagu horumarinayo Caasimadda, iyadoo bulshada Isxilqaameyso loo istaagaan dib-u-dhiska magaalada. Isagoo sidoo kale ugu baaqay in ay sii dardargeliyaan la shaqeynta hay’adaha amniga si looga guuleysto cadowga mar walba u taagan dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed.
“Maamulka iyo shacabka degmooyinku waa in ay u istaagaan horumarinta degmadooda iyagoo wadajira, lana shaqeeyaan hay’adaha amniga, qof walba masuuliyad ayaa saaran taasoo laga rabo inuu guto kana soo baxo kaalinta uga aadan dib-u-dhiska degmadiisa”.
Tarsan oo laga Guddoomay waraaqaha Aqoonsiga safiirnimo